DAAWO:Farmaajo & Khayre oo lacagtii ugu badnayd ku daabulaya P/land si khal khal xoogan uu uga dhaco
November 8, 2019 Mahad Jama 1
GAALKACYO(P-TIMES)- Iyadoo ay sii cakirmayaan xiisadaha siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa waxaa soo baxaya warar ku aadan in xabsiyo ku yaala dalka Ethiopia loo taxaabay masuuliyiin kala duwan oo xilal ka hayey maamulka Jubbaland.
Xildhibaan Sacdiya Salaad Samatar oo kamid ah mudayaasha Baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in gudoomiyaasha degmooyinka Luuq, Balad Xaawo iyo Doollow oo dhamaantoodba ka tirsan gobolka Gedo lagu xidhay gudaha dalka Ethiopia, kadib dowladda federaalka Soomaaliya ay halkaasi gaysay.
Waxa ay sheegtay xildhibaanadu in sidan oo kale hada ka hor dowladda federaalka Ethiopia ay u gacan galisay dowladda Soomaaliya C/kariin Muuse Qalbi Dhagax oo lagu soo daayey markii dambe wada hadal dhex maray dowladda Ethiopia iyo Jabhadda ONLF.
Xildhibaanada ayaa sheegtay in dalka Soomaaliya uu galay gacan shisheeye loona baahan yahay arintaasi in laga dhiidhiyo oo wax laga qabto.
Dhinaca kale waxa ay sheegtay in deegaanada Puntland la geeyey lacago badan oo laga soo dhoofiyey Muqdisho si looga abuuro khal khal xoogan iyo dhibaato ka dhacda gudaha Puntland ayna masuul tahay dowladda Somalia.
Gabadhaan Carab Saalax nafteedii beey ku khamaartey dhoor maalmood ka dib waxaad maqlidoontaan iyadoo la khaarijiyey .
Nabar iyo Naxdin wallaahi wax ay ka naxayaan baan jirin ciddii ka hor imaato kabahooda bay ku aasayaan.